Archive du 20180705
Tolon’ny Sendika Miainga eny Ambohijatovo ny Diabe anio
Tsy nisy tanteraka na dia iray monja aza ny fiitakian’ireo sendika isan-karazany ka izao no nahatonga ny Randrambaon’ny Sendika (SSM) nanamafy omaly fa tanterahana anio alakamisy ny diaben’ny tolona sendikaly.
Resa-pifidianana Manomboka ny gidragidra
Tsy mankasitraka amin’ny hirosoana amin’ny fifidianana ny Hetsiky ny Fanorenana Ifotony na ny HFI, izay nohamafisin’i Pety Rakotoniaina iray amin’ireo mpikambana tamin’ny fandaharana Vahaolana ao amin’ny onjam-peon’ny Top Radio 102.8 FM.
Tetibolan’ny fifidianana Nanome 1,7 tapitrisa dolara ny Vondrona Eoropeanina
Nomarihina tamin’ny fomba ofisialy omaly teny amin’ny biraon’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ny fandraisan’ny Vondrona Eoropeanina anjara ao anatin’ilay kitapom-bola iombonana ao amin’ny tetikasa ho fanohanana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara na Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar (SACEM).
Andry Rajoelina Hamitaka ny Malagasy indray
Rehefa avy namitaka an’Antananarivo tamin’ny vary mora, menaka mora, coliseum, Lapan’ny tanàna, fony izy ben’ny tanàna i Andry Rajoelina, dia io indray fa hamitaka ny Malagasy manerana an’I Madagasikara amin’ny IEM. 10% raha be indrindra tamin’ny volabe 100 tapitrisa dolara sandan’ny fitrandrahana vy tany Soalala tamin’ny orinasa Wisco,
Kandida amin’ny fifidianana Homelohin’ny antoko Teza
Efa nanambara hatrany ny antoko Teza, hoy ny filohany, Jean Louis Rakotoamboa fa tsy handray anjara amina fifidianana raha tsy voamboatra ny fitsipiky ny demokrasia eto amintsika.
HFI sy ny tariny Sao dia efa misy mifoka rongony, hoy i Doudou
Naneho ny fahasorenany manoloana ny fihetsiky ny mpanao politika sasany ny filohan’ny vovonana politika Dinika ho Fanavotam-Pirenena (DFP), Tolojanahary Maharavo na Doudou rehefa ela tsy niteny.
Tolona marobe 2018 Izay milefitra eo mampamangy
Nirongatra ny tolona sy fitakiana sendikaly teto Madagasikara tamin’ity taona 2018 ity, indrindra taorian’ny zava-nitranga tetsy Analakely ny 21 aprily iny.
Groupe SOCOTA Notoloran’ny CNaPS mari-pankasitrahana
Nanolotra mari-pankasitrahana ireo mpitantana ny orinasa SOCOTA noho ny fandraisana andraikitra ataon’izy ireo amin’ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ny mpiasa, ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy (CNaPS) omaly ka tany Antsirabe no nanatanterahana ny lanonana.
Asa fanaovan-gazety Nodimandry i Lantomalala Rasata
Taorian’ny fahalasanan’i Maurice Tsihavonana sy Charles Andriantsitohaina dia misaona indray ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.
Mondial 2018 Ireo mpampidi-baolina be indrindra
Baolina 21 hatreto no tafiditra taorian’ny fotoana ara-dalàna 90’ amin’ny Mondial 2018 atao any Russie ankehitriny.
Basket AT2B 10 Taona lSlKA 'zao Hiditra amin’ny andro faha-18 sy faha-19
Ny andro faha-18 sy faha-19 no hotanterahina ny sabotsy 7 sy alahady 8 jolay 2018 manomboka amin’ny 8:00 maraina-4:00 tolakandro eny amin’ny kianja At2b Andraisoro ary amin’ny 8:15 maraina-4 :00 tolakandro eny amin’ny kianjan’ny lycée technique Ampasampito ahitana ny sokajy sénior lahy sy vavy, Vétéran lahy sy vavy, U 12 zazalahy, U 18 zatovolahy.
Baolina kitra Hifandimby ny Thb CL Malagasy sy Telma CM
Ireo kianja sentetika CNaPS Sport eny Vontovorona sy any Ampasambazaha Fianarantsoa no finidin’ny FMF hanatanterahana ny dingana faharoa ny “Thb Champions League Malagasy 2018” ny 13-22 jolay 2018.
Dia sanatria ho toy ny sary indray mipika na fasika entin-driaka ka hampijininika ny jinin’anjely mianjera toy ny voalazan’ireo tononkalo sy tononkira ve no hiafaran’ireo tolona isan-karazany notarihina tamin’ny resaka fanovana rehetra tamin’ity taona ity ?
Andriantsitohaina Jean Charles Natao veloma farany amin’ny maha olomangam-pirenena azy
Azo ambara fa tena fandevenana olomangam-pirenena tokoa no natao tamin’ny nofo mangatsiakan’Andriantsitohaina Jean Charles omaly alarobia 4 jolay 2018.
Krizin’ny fampianarana Tsy mbola misy vahaolana matotra
Na dia nanamafy aza ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena fa tsy hihemotra ireo fanadinam-panjakana maro samihafa dia nilaza kosa ireo mpanabe nanao fitokonana tetsy Anosy, omaly fa na hivaly anio aza ny fangatahan’izy ireo dia mbola hitaky iray volana amin’ny fanjakana izy ireo hanatanterahany ny fanampin’ora “rattrapage”.
Sendikan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana sy ny hetra Tsy manaiky ireo fanapahan-kevitra kitoatoa
Manoloana ny fizirizirian’ny fanjakana sy ny tsy fahazoana fahafaham-po amin’ny fitakiana atao nandritra izay 2 volana izay dia nanova tetikady sady hanamafy hatrany ny tolona ny sendikan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana sy ny hetra. Hisy ny diabe anio miainga eny Ambohijatovo izay iarahana amin’ny Firaisankinan’ny Sendika eto Madagasikara (SSM).
Namoaka baiko ny minisitry ny atitany ny amin’ny fanemorana ny fahazoana mampiasa ny karatra fiara izay mbola tsy biometrika sy ny taratasy fahazoan-dàlana mitondra fiara teo aloha.
Efa an-dalana, raha ny vaovao voaray avy ao Mahajanga ao ny famaliana ireo fangatahan-dalana mikasika ny fitaterana an-drenivohitra ao an-toerana.
JONO TSY ARA-DALANA
Tsy mandray ny andraikiny ny mpitandro filaminana manoloana ny hafitsok’ireo Sri Lankais any Itampolo any amin’ny Faritra Atsimo andrefana iny.
Fahasamihafan’ny vidin’entana eny an-tsena Miankina amin’ny lalàn’ny tolotra sy ny tinady
Mampanontany tena ny mpanjifa maro hatramin’izay ny tsy fitovian’ny vidin’entana eny an-tsena, indrindra fa ny eny amin’ny toeram-pivarotana enta-madinika. Raha 400 Ar ny labozia iray amina toeram-pivarotana iray dia tafakatra 500 Ar ho an’ny toeram-pivarotana hafa tsy lavitra azy akory.
Fampianarana eto Madagasikara Lalaovin`ny politika
Marary ny tontolon`ny fampianarana. Mpampianatra iray mampianatra amina sekoly marobe. Mitombo isa hatrany ireo fianarana tsy miankina kanefa tsizarizary ny efitranon-tsekoly sy ny kalitaon’ny fampianarana.